Umzi-mveliso woMvavanyi waMandla oQhubhukayo-iTshayina iTshayi yoMvavanyi wamandla aQhubisayo abavelisi, ababoneleli
I-DRK108 yokuvavanya i-electronic tear tester sisixhobo esikhethekileyo sokumisela amandla okukrazula.Esi sixhobo sisetyenziselwa ukuzimisela ukukrazula kwephepha, kwaye singasetyenziselwa ukukrazula kwekhadibhodi yamandla aphantsi.
DRK108A iphepha Tearness Tester
I-DRK108A yePhepha lokuTearness Tester sisixhobo esikhethekileyo sokumisela amandla okukrazula.Esi sixhobo sisetyenziselwa ukuzimisela ukukrazula kwephepha, kwaye sinokusetyenziselwa ukuzimisela ukukrazula kwekhadibhodi yamandla aphantsi.
I-DRK109ST ye-Pneumatic yentloko ephindwe kabini yoMvavanyi wokuQhutywa kwentloko
I-DRK109ST Pneumatic Double-head Burst Tester sisixhobo sohlobo lweMullen yehlabathi jikelele esona sixhobo sisisiseko sokuvavanya ukusebenza kwamandla kwephepha kunye nekhadibhodi.Esi sixhobo silula ukusebenza, sinokuthenjwa ekusebenzeni, kwaye siqhubele phambili kubuchwephesha.
I-DRK109 paperboard bursting tester sisixhobo sohlobo lweMullen yehlabathi jikelele esona sixhobo sisisiseko sokuvavanya ukusebenza kwamandla ephepha kunye nebhodi.Esi sixhobo silula ukusebenza, sinokuthenjwa ekusebenzeni, kwaye siqhubele phambili kubuchwephesha.
I-DRK109 Touch Screen iSmart Cardboard Bursting Tester sisixhobo sohlobo lweMullen yehlabathi jikelele esona sixhobo sisisiseko sokuvavanya ukusebenza kwamandla kwephepha kunye nekhadibhodi.Esi sixhobo silula ukusebenza, sinokuthenjwa ekusebenzeni, kwaye siqhubele phambili kubuchwephesha.
I-DRK109CQ Pneumatic Intelligent Burst Tester sisixhobo sohlobo lwe-Mullen yehlabathi jikelele kunye nesixhobo esisisiseko sokuvavanya amandla kunye nokusebenza kwephepha kunye nekhadibhodi.